‘यौ’,न सन्तुष्टी कुन उमेरका महिलासँग ‘यौ’,न स,म्पर्क गर्दा बढी मिल्छ ? - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
‘यौ’,न सन्तुष्टी कुन उमेरका महिलासँग ‘यौ’,न स,म्पर्क गर्दा बढी मिल्छ ?
कुन उमेरको यौ७ न सम्बन्ध बढी रोमान्चक र आनन्ददायक भन्ने बिषयमा धेरै बहसहरु हुने गर्दन् । सामान्यतया किशोरावस्थाको समयमा मान्छे से७ क्सको विषयमा सबैभन्दा धेरै उत्सुक हुन्छ र त्यस्तो कौ,तु,ह,लताको उमेरमा गरिने से७ क्समा उसले सबैभन्दा धेरै स, न्तुष्टी पाउँछ होला भन्ने आमधारणा छ । तर यो धारणा सही भने होइन ।
त्यस्तै महिलाहरुले औषतमा १७ वर्षको उमेरमा आफ्नो कु८मा,रि,त्व गुमाउने गरेका छन् । यस्तै पुरुषहरुको हकमा औषतमा १८ वर्षको उमेरमा उनीहरुको भ७ र्जिनिटी तो,डिने र २९ वर्षको उमेरमा से७ क्सको मामिलामा सबैभन्दा बढि स क्रिय हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अनलाइन मार्फत गरिएको यो अध्ययन एक यौ७ न खेलौना उत्पादक कम्पनीलेगरेको हो । यसअघिको अर्को अध्ययनले भने पुरुषले १८ वर्ष तथा महिलाले ३० वर्षको उमेरमा से७ क्समा सबैभन्दा धेरै मज्जा लिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
मेरो बिहे किन हुँदैन
टोलको एकजना शुभचिन्तक आन्टी प्राय सोधिरहन्छिन् ‘हैन तिमी बिहेचाहीँ कहिले गर्ने नि। म अलि...
सीएनएन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अर्को लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म स्न्यापच्याटले पनि सधैँका...
भर्खरै गयो शक्तिशाली भूकम्प, कम्तिमा ३४ जनाको मृ’त्यु
ह्वाइट हावस छोड्नु अघि ट्रम्प प्रशासनको कडा निर्णय
किन मध्यरातमा अनुष्कालाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिँदैछ ?
विराट–अनुष्काको फोटोग्राफरलाई अपिलः ‘हाम्री छोरीको तस्बिर नखिचिदिनुहोस्’